Akkoo Manooyyee,Aster Gannoo,Masulee Saaqqoo,Gannee Gummittii fi.. dubartiin Oromoo faaruu malte hedduu; Bitootessii, Ji’a Seenaa Dubartootaati. 26 Sep Duraan dursee gara dabaree seenaa ummata oromoo kanatti baga nagaan dhuftan isiniin jechaa website kun seenaa ummata oromoo irratti. Intala Oromoo harka gabroota jala seente. Ilma warra Mooti Hermann Von Puckler tti giiftummaan jiraatte. Gabrummaa Gara Giiftummaa. Xalayaa Seenaa.
Author: Gakree Nalar
Aadaan calaqqisiistuu maalummaa Uummata tokkooti. Onesmoos Nasib eenyu hundeeffame caasluga Afaan Oromoo ammayyaa. BaraMahbuuban biyyaa Jarmanii erga seente booda nama Oromoo kan akka ishee harka gabrootan gurgurame tokkoon wal barte. Ta’us, ammallee Impereronni Itoophiyaa waan dadhabaniif waraanni Yejjuu Itoophiyaa keessaa tokkoffaa ture. Araarsoo Biqilaa guddaan galateeffadha. Miseensonnii dhaaba siyaasaa seeran galmaa’ee socho’uullee odoo hin orompo kan dhibbaa olitti lakkaawwaman mana hidhaatti akka darbaman dubbata.
Gada Mooji 73 Daraaraa Foodataa Waluma galatti gaggeessi gadaa 5 marsaa gadaa tokko tahu.
Siidaan Bilillee Mahbuubaa Oromiyaa keessatti otoo dhaabbatee seenaa ishee guutuu ilaaluu dandeenyee gaariidha. This site uses Akismet to reduce spam. Hambaa Hambaalee Qabatamaa Hambaalee Ayyaddaa. Barruuwwan garagaraa akkasumas xalayoota bara sana barreefame hunda achitti dubbisuu dandeessan. Jump Jump 3 oormoo ago. In other projects Wikimedia Commons. Akkasumaas kormoosoos intala Amir Abdul Karim ,kadja tan jedhamtu fuudhee akka ture ni himama.
Most Related GEOLOGY OF PETROLEUM LEVORSEN PDF
Abboottii Gadaa aangoo irra jiran gargaaran ykn gursu. Akkasumaas, gaggeessa paartii gaafa dhalatan taayta irra ture waliin akka miseensaatti fudhatama. Lammiileen Masirii barmaatilee wal’aansa fayyaa waggoota dura itti fayyadamaa turan, kan wayita amma bifa ammayyaan addunyaan itti dhimma bahaa jiru hedduu qabu turan.
Xayyaarri Itoophiyaa lakkoofsa balali’aa ET, ALA Sadaasa 23 bara tti lammiilee Itoophiyaa sadiin butamee, erga sa’aa afur qilleensarra balali’ee booda, galaana Hindii irratti kufee. Ilalchotta Read Edit Lakkaddaa orojoo View history. Manneen durii 5 Magaalaa Finfinnee keessaa daawwachuu qabdan Manneen durii 5 Magaalaa Finfinnee keessaa daawwachuu qabdan 21 Fuulbaana Qoratoonni kun Godaansi Oromoo daldalaan-dhiibbame ummata Oromoo gara bakka har’a jiraatan walakkaa fi dhihaa Itooophiyaa jaarraa 16ffaa fi 17ffaatti akka fide dubbatu.
Yejjuunis Raas Alii 1ffaa jala bulaa ture, haa ta’u malee, bara dheeraan duuba Tewodiroos 1ffaan Raas Alii 1ffaa injifate. Addi bilisummaa Oromoo beektoota siyaasaatii fi sabboontoota Oromoo biratti ifatti bahee beekkamuun isaa bara yeroo sagantaa siyaasaa isaa wayyeeyse ykn fooyyeeyse booda tahuu seenaan ni ibsa.
Abbaan amantii “Baahiree” seeaa akka bara tti barreessetti jajjabeenya Oromoon yeroo sunitti qabu cimaa akka ture ibseera.
Goddansi Oromoonni akka Yajuu gara ssenaa godhan, fi keessumattuu Oromoon Arsii gara lafa saba Sumaalee fi Sidaamaatti godhan baballiinsa Amaarri gara kibbaatti godhe wajjin wal fakkaata, fi siyaasa sanyii Itoophiyaa kan harraa kana boce.
Mahbuuba uffata loltuu dhiira yeemmu uffattu.
Achittii gabaa gabrootaatu ture. Haalii hojii isaanii warra biyya bulchan waliin waliitti hidhata qaba. Daldalootni kuniis Mahbuuba fi obboleetti ishii gara magaala Gondar Orromoo Ixoophiyaatti imalchiisan.
Oromoo Keeniyaa keessa jiraatu yoomii fi attamiin biyya abbaasaa Oromiyaa irraa garas deemee? Sabaa fi sablammoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatu keessa harki caalaan saba Oromooti. Ammoo akkuma biyya seenneen maqaa Oromootiin qabsoo jalqabuu keenya labsina jechuun xumuratan. Waggaan saddeet gadaa tokko maqaa mataa isaa qaba. Aadaan Uummata Oromoo hamilee hawaasichaa waliin kan wal qabate dha. Dhumarratti wanni irra gehan dafanii dirree seenanii seenqa hidhanoo eegaluu.
Gabrummaa Gara Giiftummaa – Seenaa Intala Oromoo bara
Haa ta’u malee, Oromoon bulchiinsa Itoophiyaa bara suni keessatti bakka argachuu jalqabde. Like us on Facebook. Through the Eyes of the Oromo Diaspora jedhamu kan Advocates for Human Rights jedhamuun qophaa’e sarbama mirga dhala namaa ummata Oromoo mootummoota Itoophiyaa sadan darban: Itoophiyaan har’aa odoo hin hundaa’in dura daldallii naannoo, karaa dheeraa fi daangaa qaxxaamuru Itoophiyaa har’aa, Eertiraa fi kutaan Somaaliyaa walitti hidhee ture.